Al-Shabaab oo sheegtay inay ka danbaysay Qaraxii Bosaaso ka dhacay | maakhir.com
Al-Shabaab oo sheegtay inay ka danbaysay Qaraxii Bosaaso ka dhacay
February 6, 2008 in Somalia
Bosaaso:- Kooxda la baxday Al- Shabaab ayaa dusha u ritay inay ka danbeeyeen qaraxii xalay lagu hoobtay ee ka dhacay Dekeda Magaalada Bosaaso,saasi kooxdaasi waxay ku sheegeen Bar Enrtarnet- oo ay is ticmaalaan iyaga oo sheegay inay uga gol lahayeen inay ku dilaan ciidamo Itoobiyaan ah oo goobtaasi Joogay.
Al-Shabaab waxa ay bartoodaa Entarnet- ku sheegeen in ay dileen 30- ka mid ah Dadkaasi ay doonayeen ayna dhaawaceen 100 Ka mid ah ,waxa ayna ujeedka Weerarka ku tilmaameen in uu yahay in ay halkaasi joogeen Ciidamo ka mid ah kuwa Itoobiya ,waa sida ay hadalka udhigeene.
Kooxdaasi qirtay falkaasi ayaa sidoo kale sheegay inay goobta falkaasi ka dhacay ay ahayd meel ay u soo tumasha tagaan Ciidamada Booliska ee Magaalada Bosaaso iyaga oo ku sameeya Fawaaxish iyo arimo ka reeban Diinta Islaamka, waa siday Hadalka u dhigeene.
Al-Shabaab waxay kaloo Bayaankoodaas ku sheegeen inay doonayeen inay weerar buuxa ku qadaan Ciidanka ilaalada ka ah Dekeda Bosaaso kuwaasi oo ay sheegeen inay yihiin kuwa had iyo jeer gacan siiya Itoobiyaanka.
Kooxdaasi waxay kaloo sheegeen inay Shacabka Puntland uga degayaan inay gacan siiyaan Ciidamada Itoobiya oo ay sheegeen inay joogaan gudaha Maamulka puntland,waa sida ay qoraalkoodu u dhigeene.
Qaraxaasi xalay dhacay ayaa waxa ku dhintay dad aad u fara badan halka kuwa kalena ay ku dhawaacmeen,waxana dadkaasi inta badan ay ahaayeen kuwa ah dadka ka soo kicitimay Dalka Itoobiya, marka laga reebo 6- Ruux oo Somali ah oo uu ka mid yaha hal Askari oo ahaa Ilaalada Dekeda Bosaaso.
Maamulka Puntland ayaa ilaa haatan wax jawaab ah ka soo saarin qaraxaasi iyaga oo diiday inay haba yareetee waxa tafaasiil ah siiyaan war baahinta,had iyo jeer waxay sheegayaan Maamulka Puntland inay wadaan baadhitaano xoogle oo ku soo qabanayaan dadkii falkaasi gaystay.
Qaraxan ayaa ku soo aadaya maalin uun markii Cade Muuse ka dhoofay garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Bosaaso isaga oo taboolka ka qaaday inuu u sadcaalay Dalka Itoobiya.
waxaan aad uga xumahay dhibta ka dhacaday bosaso puntland somalia.waan in la iska qabtaa al shabab, dhi ayay wadaan.
« Faah Faahi dheeraad ah Qaraxii caawa Bosaaso Gil Gilay
Afqudhac ayaa ka jaabay Hadal ka soo yeedhay Kooxda Al-Shabaab »